आज सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रतिताेला कति पुग्यो…… – SUDUR MEDIA
May 5, 2021 AdminLeaveaComment on आज सुनचाँदीको मूल्य घट्यो ! हेर्नुहोस् प्रतिताेला कति पुग्यो……
हिजो र अस्ति लगातार दुई दिन बढेको सुनचाँदीको मूल्य आज घटेको छ । आज बैशाख २२ गते बुधबारको दिन सुन तोलामा ३०० रुपैयाँले ओरालो लागेको छ ।
आजको दिन छापावाला सुन प्रतितोला ९० हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । यस्तै तेजाबी सुन प्रतितोला ८९ हजार ८०० रुपैयाँमा किनबेच हुँदैछ । अघिल्लो दिन सुन तोलामा २०० रुपैयाँले बढेर प्रतितोला ९० हजार ६०० रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
बुधबार सुनसँगै चाँदीको भाउ पनि ओरालो लागेको छ । यस दिन चाँदी तोलामा पाँच रुपैयाँले घट्दा प्रतितोला एक हजार ३२० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको महासंघको तथ्यांकले देखाउँछ । मंगलबार भने चाँदी तोलामा नै २५ रुपैयाँले वृद्धि भएर प्रतितोला एक हजार ३२५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्: नागरिकको जीवनलाई लतार्दै आर्यघाट पुर्‍याउँदै छ सरकार ,अस्पतालमा बेड छन् तर आफ्नो र आफ्नाका लागि”, रवी लामीछाने (भिडियो सहित) ! रवी लामीछानेले हिजो राती आफ्नो युबट्युब च्यानेलमार्फत सम्पूर्ण देशवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई सुरक्षित रहन आग्रह गर्दै यो सं’कटको घडीमा सरकारको आशा र भरोसामा धेरै नरहन आग्रह समेत गरेका छन्। मानवीय सं’कटको यो घडीमा सरकार यतिबेला बहिरो भएको छ र नागरिकको जीवनलाई लतार्दै आ’र्य’घा’ट पुर्‍याइरहेको छ,अस्पतालमा बेड र सं’सदमा सीट त छन् त्यो पनि आफ्नो र आफन्तको लागि मात्र।
जीवन रहे यस्ता भेटघाट जिन्दगीभर गरौंला,बाँच्नु जतिको ठूलो उपहार केही छैन। आफ्नो माया नलागे पनि आफूलाई माया गर्नेहरूको लागि सो’चौं,रात,बिरात भोकप्यास केही नभनी उ’प’चा’र’का खटिएका स्वा’स्थ्य कर्मीका लागि सोचौं।हामी अब पनि जोगिएनौँ भने भोलि प’छु’ता’उनु बाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन भन्दै आफ्नो सन्देश प्रवाह गरेका छन्। कृपया भिडियो हेर्नका लागि तल दिइएको लिंकलाई क्लिक गर्न न’भुल्नुहोला: